Barcelona oo qorsheyneysa saxiixa xiddiga muhiim ka ah Manchester United – Gool FM
(Barcelona) 10 Dis 2021. Wargeysyada Spain ayaa sheegay in Barcelona ay qorsheyneyso inay lasoo saxiixato xiddiga Manchester United Marcus Rashford, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga jiilaalka ee soo socda ama xagaaga.
Kooxda Barcelona ayaa dhibaato badan ay haysataa, gaar ahaan dhanka weerarka, iyadoo Blaugrana ay dhalisay labo gool oo qura intii lagu guda jiray ololaheeda heerka guruubyada tartanka Champions League, taasoo markii ugu horeysay muddo 21 sano ah loo diray inay ka ciyaarta tartanka UEFA Europa League.
Barcelona ayaa jug xoogan kala kulantay dhanka weerarka kaddib markii uu xagaagii hore ka tagay halyeeyga reer Argentina ee Lionel Messi, xilli sidoo kale uu ka dhawaacmeen xiddigaha Ansu Fati iyo Sergio Aguero.
Wargeyska “ElNacional” ee dalka Spain ayaa sheegay in Barcelona ay sidoo kale isha ku hayso inay kala soo wareegto Marcus Rashvord kooxda Manchester United, maadaama ay Barca aamisan tahay inay ku qancin karaan ciyaaryahanka inuu ku biiro garoonka Camp Nou.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in tababaraha Barcelona ee Xavi Hernandez uu dareemayo in Marcus Rashford uu hogaamin karo weerarka kooxda reer Catalonia xilliyada soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, dalabaadka dhaqaale ee Manchester United ayaa laga yaabaa inay ku adkaan doonto kooxda sida Barcelona oo kale ah oo heysata dhibaatooyin dhaqaale oo badan.
Real Madrid oo bisha January u dhaqaaqeysa saxiixa xiddig ka tirsan kooxda Chelsea